अवैध कल बाइपासका अभियुक्तसँग रु‍. १२ अर्ब १२ करोड बिगो दाबी
समाचार आइतबार, साउन २६, २०७६
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा पक्राउ परेकासँग अहिलेसम्म रु. १२ अर्ब १२ करोड बिगो मागदाबी दिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
ब्यूरोले अहिलेसम्म देशका १ सय १० स्थानबाट अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्ने १ सय ३१ नेपाली र ३७ विदेशी गरी १६८ जनालाई पक्राउ गरी उक्त रकम बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तर, यसमध्ये कति मुद्दा अदालतबाट छिनोफानो भयो भन्ने प्रष्ट छैन ।
ब्यूरोले अवैध कल बाइपासविरुद्ध कारबाही गर्दै विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीका २३ हजार २६३ थान सीम कार्ड र अन्य आधुनिक उपकरण बरामद समेत गरेको जनाएको छ ।
२३ साउनमा ब्यूरोले अवैध रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गरिरहेको अवस्थामा बालुवाटार, टुसाल शीतलमार्गमा चितवन का ३६ वर्षीय नसिव तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । तामाङविरुद्ध दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ दिन म्याद लिई अनुसन्धान कार्य भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
तामाङको साथबाट अवैध कल बाइपासमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण तथा नेपाल टेलिकमका १० र एनसेलका २० थान सिमकार्ड समेत बरामद भएका छन् ।
उनी यसअघि पनि २०७२ सालमा कल बाइपासमा संलग्न रहेको पुष्टि भई एक वर्ष कैद सजाय भुक्तानी गरी छुटेको भेटिएको प्रहरीको दाबी छ । छिटो आम्दानीका लागि तामाङले कल बाइपासको धन्दा जारी राखेको देखिएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी उपकरणहरु राखी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गर्नु अपराध हो ।